Ọrụ - Zhongshan City YALIS Hardware Products Co., Ltd.
YALIS Design nwere ike inye gị ihe owuwu ụlọ ị chọrọ, site n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ, ndị na-eche ụzọ n'ọnụ ụzọ, ndị nche ụzọ na ọnụ ụzọ na nso nso, YALIS nweta gị usoro maka ngwaike ngwaike ụzọ dabere na zinc alloy, aluminom alloy na igwe anaghị ígwè ngwaike.
YALIS Design nwere ike imeghari maka oru gi, ma lee ụfọdụ n'ime ihe owuwu anyị na ụlọ ndị dị n'akụkụ ụwa dị iche iche.
International Lake City dị na Chongqing, onye nrụpụta ahụ bụ Xiangjiang International China Real Estate Co., Ltd. Thislọ ọrụ a gụnyere azụmahịa na ebe obibi, dị ka ụlọ nkwari akụ, ụlọ, ụlọ ọrụ, ụlọ, na nlegharị anya ndị njem. A na-asọpụrụ YALIS isonye na ọrụ a ma bụrụ otu n'ime ndị na-enye akwa ngwaike ọnụ ụzọ.
A na-emegharị Osimiri Australia na YALIS BF74204 usoro mkpọchi nkewa maka ọrụ ya dum. Site na afọ ojuju na ogo, YALIS amalitela mmekọrịta dị ogologo na ahịa Australia.
Na-agbasa Da Nang
Omlọ elu Blooming bụ ụlọ elu ejima mbụ na Da Nang City bụ nke malitere iwu na June 2008 na-ewu ọnụ ọgụgụ nke ụlọ elu 37-storey ọ bụla. Ihe enyere: Smart mkpọchi maka IONlọ ezumike ụlọ ma kpọchie ya na ngwa Yalis.
Ogige Mgbụsị akwụkwọ dị na Shanghai, mpaghara CBD. Ha nakweere usoro mkpọchi nke YALIS BF7037 maka ọrụ ya dum. Na-ejikọ ọnụ ụlọ ndị nwere ngwaike ọnụ ụzọ dị elu, na-akọwapụta ụlọ emeela.
Ballọ nkwari akụ Baltschug Kempinski Moscow
Ejirila ụzọ ụzọ YALIS BF, ejiri ya na Hotel Baltschug na Kempinski, Moscow. YALIS, onye akpọchiri ụzọ akpọchi maka ọrụ ahụ.
Jordan Springs na Israel
Israel Jordan Springs bụ ọrụ na-ewu ewu nke gụnyere ọdọ mmiri 3, ụlọ ahịa, na ubi.Ọ bụ ọrụ gbasara 230 hm² nke na-eji YALIS BF74223 & BF74229 mkpọchi mkpọchi gafee oge.